China China Imibala Canvas Chef Bib Apron Ngamaqhosha amathathu CU335S043022U4 umzi-mveliso kunye nabathengisi | UDuomilai
Ikhowudi yento CU335S043022U4
Ubungakanani ISITSHI esinye
Amagama aphambili umpheki we-apron, i-bib apron, i-canvas apron, iyunifomu yokubuka iindwendwe
Indwangu I-45/55 poly / ikotoni GSM.300g
Ukuthunga Umsonto Intambo yePolyester ikwabizwa ngokuba yintambo yamandla aphezulu. Ihlala ibizwa ngokuba (ukukhanya kwentsimbi). Yeyiphi engahambelaniyo, i-shrinkage ephantsi, kunye nokuzinza okuhle kweekhemikhali. Ngenxa yamandla aphakamileyo, ukumelana okuhle kwe-abrasion, i-shrinkage ephantsi, i-hygroscopicity elungileyo kunye nokuchasana nobushushu, umsonto we-polyester ayihambelani ne-corrosion, ukumelana nethambisi, kwaye ayibuthi mbungu. Ukongeza, ineempawu zombala opheleleyo kunye ne-luster, ukukhanya okukhawulezayo kombala, akukho kuphela, akukho discoloration, kunye nokumelana nokukhanya kwelanga.
Isici UKUZIVAVANYA Iaproni zibonelela ngokuzinza kunye nokukhusela okuphezulu kwindlela yokuphila yasekhitshini ethandabuzekayo.CHECKEDOUT iaprons zibonelela ngesixa esingenasiphelo sobuchule bokusebenza kwakho.
Yenziwe ngeendwangu ezisindayo, kunye neepokethi ezintathu zangaphambili.
Iipokotho ezingaphambi kwengxaki
Ibhanti yentsimbi eguqukayo
Ukusetyenziswa U-Barista, uBheka, uBartender, uMochologist, uChef, u-Waiter, uLinda, uLinda-abasebenzi, abasebenzi baseKhitshini. Ukungenisa izihambi eCafe, ihotele, indawo yokuphumla, irestyu, iBistro, indawo yokubhaka, Ivenkile yeevenkile, Ivenkile Ivenkile yeKofu, iBar, iPorn Rover yeKofi, uMenzi weKofu. Sebenza ngeZarber, Umlungisi weenwele, i-Beautician, i-Stylist, i-Colourist, i-Florist, uMyili weentyatyambo, uMyili wezobugcisa, iGcisa, iGadier, Woodworker, Umchweli.
Sebenza kwiVarber shop, Salon, Manicure, Ivenkile yeentyatyambo, ivenkile yeTatoo, ivenkile yeencwadi, ivenkile yeRetail, iworkshop yeCraf.
Edlulileyo: Umkhosi weGalari Umbala weCanvas Chef Bib Apron onezingxobo zontathu CU335S042022U4
Okulandelayo: Umbala ohlaza okwesibhakabhaka i-Canvas Chef Bib Apron enezinto ezintathu zePoke i-CU335S048022U4
i-anvas Bib Apron
Ii-hefs Bib Aprili zineengxowa
UDenim wesikhumba u-Anti-Winki we-Crossback Chef Apron ...
Umlindi oMnyama wePotton Waist ende eyiAvron ene ...
I-Poly Cotton Crossback Ikhitshi I-Cheens ii-CU352 ...
Umbala ophuzi i-Canvas Crossback Chef Bib Apron CU ...
Umbala weGrey Canvas eCrossback Chef Bib Apron CU37 ...
Icwecwe Elimnyama le-Cotton Cross Back Chef Apron CU3 ...